Kanna Soo saara Alaab-qeybiyeyaal,Waxsoosaarayaal ka socda Bolise
[Magaca Laatiinka] Lampranthus spectabilis (Haw.) NEBr.
[Qeybta La Adeegsaday] Dhir Dhan
[Muuqaalka] Budada Jaalaha ah ee buniga ah
[Wax ka kooban] Mesembrine
1. Iyadoo shaqada ka hortagga niyad-jabka iyo dejiyaha, ay saameyn ku yeeshaan habdhiska dareenka;
2. Iska yaree welwelka, walbahaarka iyo kacsanaanta;
3. Wuxuu leeyahay shaqada iska caabinta arrhythmia, cadaadiska hoos u dhaca, hoos u dhaca sonkorta dhiigga iyo ilaalinta shaqada nidaamka wadnaha;
3. Iyadoo shaqada kordhinaysa awoodda difaaca dabiiciga ah ee jidhka;
Ku saabsan Kanna Extract
Kanna waxa u isticmaali jiray xoolo-dhaqatada Koonfur Afrika iyo ugaadhsadayaasha sidii walax niyadda beddeleysa ilaa wakhtiyadii hore. Dhaqan ahaan, walxaha dhirta la qalajiyey waxaa badanaa loo ruugaa sida quid, casiirkana waa la liqay, laakiin sidoo kale waxaa laga sameeyay shaaha iyo tinctures. Waxa kale oo loo nuugay sidii buuri, ama sigaar cabbin, mararka qaarkoodna lagu daray dhir kale, oo ay leeyihiin qabaa'ilka Koonfur Afrika.